Brand Story - Chengdu Xinzi Rain Clothing CO., Ltd.
Xinzi Rain dia natsangana tamin'ny taona 2004, ny orinasa lehibe dia misy ny Chengdu Xinzi Rain Shoes natsangana tamin'ny taona 1998 ary ny Xinzi Rain Clothing dia niorina tamin'ny 2004.
Rehefa afaka 24 taona ny fampandrosoana dia nanjary orinasa maoderina mampifangaro ny fampandrosoana, ny endrika, ny famokarana, ny varotra, ny serivisy, ny fanafarana ary ny fanondranana ny Vehivavy akanjo.
Manome "Fashion Wearing" tokana ho an'ny vehivavy erak'izao tontolo izao ny orinasa, mahatonga ny vehivavy ho tsara tarehy kokoa, tsy voafatotra intsony, ary hanana fahatokisan-tena sy hery bebe kokoa.
Ny vokatra dia misy High Heels, Boots, Sportswear, Underwear, Lingerie, Seamless ary Under Free Bras, Plus Size Bra & Brief, ary ny sasany dia miaraka amina marika tompony.
Miaraka amin'ny 8000 metatra toradroa amin'ny valan-javaboary maoderina, mpiasa maherin'ny 500, mihoatra ny 20 ny tsipika famokarana matihanina ary manana ny R & D miaraka amin'ny haavo iraisam-pirenena, ary efa ho 30 ny patanty vokatra nasionaly.
Xinzi Rain dia nomena mari-boninahitra orinasa tsara kalitao, orinasa sivilizasiona, orinasa fiarovana ny tontolo iainana ary marika folo ambony amin'ny indostria atin'akanjo any Shina.
Miandrandra ny ho avy
Manantena ny ho avy, Xinzi Rain dia hanaraka ny fotoana, hitrandraka ary hanavao, ary hiroso tsikelikely mankany amin'ny làlan'ny fampandrosoana ny indostrialy, ny varotra, ny teknolojia, ny fanaingoana ary ny fanangonana.
● Fananganana orinasa
● Fanavaozana maoderina
● Fivarotana tokana
● Fikarohana tsy miankina